बाणगंगा नगरपालिकाको निति तथा कार्यक्रम बारे छलफल, कसले के के भने ? – Waikhari
गृहपृष्ठ Featured बाणगंगा नगरपालिकाको निति तथा कार्यक्रम बारे छलफल, कसले के के भने ?
बाणगंगा नगरपालिकाको निति तथा कार्यक्रम बारे छलफल, कसले के के भने ?
वैखरी अनलाइन : कपिलवस्तु जिल्लाको बाणगंगा नगरपालिकाले आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को निति तथा कार्यक्रमकाबिच सर्वदलिय र सर्वपक्षिय छलफल सम्मन्न गरेको छ । पिस हिमालयन रिर्सोटमा भएको अन्तरक्रिया तथा छलफलमा बिभिन्न राजनैतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिका साथै बिभिन्न सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
कार्यक्रममा बाणगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बासुदेव खनालले हालसम्मको नगरको प्रगति प्रतिवेदनका साथै नगरभित्र भईरहेको बिभिन्न क्षेत्रको बिकासका बारेमा प्रकाश पारेका थिए ।
कार्यक्रममा स्वागत मन्तब्य प्रवक्ता बिष्णु पौडेल र प्रशासन प्रमुख केशवराज भट्टराईको सञ्चालन सम्पन्न भएको थियो ।
सो अवसरमा सहभागीहरु मध्ये कसले के भने ?
हरि अधिकारी (उपाध्यक्ष) पत्रकार महासघं कपिलवस्तु :
सञ्चार क्षेत्रमा थप बजेट आवश्यक रहेको बताउदै नगरमा हुने बिकासमा गुणस्तरीयता दिनु पर्नेमा अधिकारीको जोड रहेको थियो ।
भेषराज पाण्डे (उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्च कपिलवस्तु) :
अब्बल बिकासलाई ध्यानमा नगरपालिकालाई सुझाव दिदै पाण्डेले बोले अनुसार बिकास गर्न नसकेको बताए । सबै मिलेर केन्द्रसगंको समन्वयमा ठुलो बजेट ल्याउन आवश्यक रहेकोमा उनले जोड दिए ।
डोलकराम घिमिरे (अध्यक्ष) : कपिलवस्तु उद्योग बाणिज्य सघं
बाणगंगा नगरपालिकमा औधोगिक करिडोर निमार्णमा कपिलवस्तु उद्योग बाणिज्य सघं लागी रहेको बताउदै घिमिरेले नगरपालिकाले गरेका कामको प्रशंसा गरेका थिए । ब्यवसायिहरुको हकहितलाई मध्यनजर गर्दै अवको निति तथा बजेटमा कार्यक्रममा साना ठुला बयवसायीका लागी प्रवकारी कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गरेका थिए ।
नेपाली कांग्रेस (जिल्ला प्रतिनिधि)
बाणगंगा नगरपालिका भित्र कृषी क्षेत्रको सम्भावना बढि रहेकाले यस क्षेत्रमा बढि बजेट ल्याउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । काफ्लेले अधुरा योजनाहरु पुरा हुने गरी बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको समेत बताए ।
बिष्णु थापा (कार्यबहाक सभापति)- बाणगंगा नगर समिति (नेपाली कांग्रेस)
नगरपालिकालाई राजनैतिक दलको महत्व बुझन आवश्यक रहेकोमा थापाले जोड दिए । काम भन्दा कुरा बढि भएकाले काममा केन्द्रित हुन थापाको सुझाव थियो । घरेलु हिंसा बढेको बताउदै त्यसप्रति ध्यान दिन पनि थापाले जोड दिदै तालिम केन्द्रको स्थापनाको माग गरेका थिए ।
टेकेन्द्र क्षेत्री (माओवादी केन्द्र)
शिक्षा क्षेत्रको बिकासमा ध्यान दिन अनुरोध गर्दै सरकारी बिद्यालयको गुणस्तरीयता र दरबन्दी मिलान गर्न आवश्यक रहेको बताए । नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासि बढेको भन्दै रोकथामका लागी निति ल्याउन आवश्यक रहेको क्षेत्रीले बताए ।
झविलाल पोख्रेल (अध्यक्ष) नेकपा एमाले कपिलवस्तु
बौद्ध शिक्षा पाठ्यक्रम लागु गर्न सकेकोमा बाणगंगा नगरपालिकालाई बधाई दिदै कार्यन्वयनमा जोड दिए । फोहोर ब्यवस्स्थापन, चोरी निकासि नियन्त्रण र शिक्षकको दरबन्दी मिलानका लागी नगरले थप योजना बनाउन आवश्यक रहेकोमा अध्यक्ष पोखरेलले जोड दिए ।
बलराम अधिकारी (संबिधान सभा सदस्य) :
बाणगंगाको बिकासलाई जिल्लामा हेर्दा राम्रो भएतापनि थप अन्य जिल्लाका उत्कृष्ट नगरपालिकासगं तुलना गर्ने गरी सबै लाग्न आवश्यक रहेको बताउदै अवको निति तथा कार्यक्रममा कोरोना महामारीको डर अझै रहेकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ बजेट बिनियोजन गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
बिमला घिमिरे (राष्ट्रीय सभा सदस्य ) :
नगरले हालसम्म गरेको काम समग्रमा राम्रो रहेको उनले बताइन । अवको निति तथा र्काक्रममा बालबालिका र युवा रोजगारका कार्यक्रम ल्याउन आग्रह गर्दै नगरपालिकाको बिकासका लागी राजनैतिक दलको आस्था भन्दा माथि उठेर सबै लाग्न पर्ने बताइन । अवको निति तथा कार्यक्रममा नगरको शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउन उनको सुझाव थियो ।
अत्तहर कमाल मुसलमान (सासंद प्रतिनिधि सभा)
बाणगंगा नगरपालिकाले गरेको कामको सिको जिल्लाका अन्य पालिकाले पनि गर्न आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबै मिलेर लगानी जुटाउन आवश्यक रहेको बताउदै कमालले नगरबासीको स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउन उनले सुझाव दिए । नगरभित्र चोरी निकासि र लागु औषध नियन्त्रणमा नगरले थप योजना बनाउन आवश्यक रहेको समेत उनले बताए ।
(नोट : सासंद कमाल कार्य ब्यस्तताले सुरुमै बोलेर कार्यक्रमबाट निस्किएका हुन । )
कपिलवस्तुमा गोठमा लुकाएर राखेका २ बन्दुक बरामद